के तपाई साँच्चै दुब्लाउन चाहानुहुन्छ ? यसरी सुरु गर्नुहोस जिरापानी - समय-समाचार
के तपाई साँच्चै दुब्लाउन चाहानुहुन्छ ? यसरी सुरु गर्नुहोस जिरापानी
६ असार २०७७, शनिबार ००:०९
अव्यबस्थित खानपान, तनावयुक्त दिनचर्या, र अस्वस्थकर खानेकुराले हिजोआज मानिसमा तनाब बढ्नुको साथै शरिरिको तौल पनि बढ्ने गरेको पाइन्छ । आफनो शरिरले थाम्न सक्ने भन्दा बढी तौल भयोभने मानिस बाहिर बाट भद्धा त देखिन्छ नै भित्रबाट पनि अस्वस्थ तथा आफैलाई असजिलो महशुश हुनेगर्छ ।
के तपाई पनि आफनो तौल सन्तुलनमा राखेर छरितो शरिर चाहानुहुन्छ । यदि चाहानुहुन्छ भने आजैबाट सुरु गर्नुहोस जिरापानी ।
हाम्रो भान्छामा प्रयोग गरिने अनेकौ चिजहरुमध्य जिरा पनि सजिलै उपलब्ध हुने चिज हो ।जसको प्रयोगबाट हामी मोटोपन घटाउनसक्छौ । कसरी प्रयोग गर्ने त जिरापानी ?
यदि तपाइले पहिलेनै एक चम्चा भुटेको जिराको धुलो बनाउनुभएको छ भने एक गिलास मनतातो पानीमा भुटेको जिराको धुलो राख्नसक्नुहुन्छ ,त्यसपछी एक चम्चा कागतीको रस र इच्छाअनुसार थोरै मह राखेर खानुभयो भने तपाइको मोटोपन बिस्तारै घट्दै जान्छ ।
यदि भुटेको जिरा छैन भने जिरापानी एकछिन उमालेर मनतातो भएपछी पनि पिउन सक्नुहुन्छ । यो प्रक्रिया हरेक दिन खाली पेटमा अवलम्बन गर्नुभयो भने १५ दिनदेखि १ महिनामा नै आफनो शरिरमा परिर्वतन पाउनुहुन्छ ।